Takasangana murume nemukadzi vane mapartners akaenda Diaspora – Vanoda Zvinhu
Hama dzanguweka, saka vakuru vakati chitsva chiri murutsoka. Handaimbozvifungira kuti kubva ndaroorwa ndichasvirwa nemumwe murume endi futi ndaiva mudzimai weruwadzano. Vanhu vazhinji vaindiremekedza zvese kumaraini nekuchurch. Kwaiva kwapera gore rose baba Tina vaenda ku South Africa kuno shava. Yedu yekuda kupfuma iyi. Baba vaT vaigaro fona havo tichitaurirana nyaya dze mhuri uye dzerudo chaidzo. Kunyange zvangu ndaifara kuti ndataura na baba mufana handizvo zvaipedza havi yekuda kusvirwa iyi yaigara iri mandiri. Asi hapana zvandaiita panguva iyi. Ndakati hangu rimwe zuva ndiri mu town hangu ndichibva kunotora mari yaiva yatumirwa naBaba vaT.Takakwira imwe motokari tiri vatatu. Ndaiti ini nemumwe mukadzi plus chimwe chikomana hacho chinenge chaitobva hacho kumafaro.Mumota maitaurwa nyaya dzakasiyana-siyana, like dzekudhura kwezvinhu, dzematongerwo enyika, nedzimwewo dzinongoitika mumugariro evanhu. Asi kutaura chokwadi zvose izvi hapana chaindinetsa. Yangu nhamo yaiva hombe vasikana zvokuti ndaiva ndapindwa nemweya waSatani chaiwo. Murume akati takura uyu ndaive ndakagara pedyo naye achirova motokari. Ainditarisa nerimwe ziso raitaura. Ndakabva ndaziva kuti baba ava vaiva vatorwa moyo neni nokuti pachimiro nerunako vazhinji vaindirubidza chizvo. Vamwe vose vakazodzika ndikasara ndavandoga nababa vaye tiri two chete. Takatarisana tichiita zviye zvekuyevana. “Nhayi mhamha makaroorwa here” ndakavhunduka pandakabvunzwa mubvunzo uyu. “Hongu mukuwasha murume wangu akatoenda kunze kwenyika last year uye tine vana vaviri” ndakamupindura. Akabva ati “Saka murimega so mazuva ese aya. Chokwadi varume hameno kuti takaita sei. Tinosiya mhuri tonakirwa hedu diaspora ko ukawana mukadzi atorwa nevanogona unoita sei. Zvakangofana na mai vekwanguwo vanongofona variko kuAmerika vanoti ndinopona nei” Apa ndipo pandaona kuti baba ava vaiva vapedza nguva vasina kumbosvira.
Ndakazvisimbisa ndichiti nhasi ndaitofanirwa kukwirwa chete. “Ambuya you can call me Spencer nokuti zvandiri pano ndakangofanana ne munhu asina mukadzi. Ndangandati tongoona yekuita just for today please. Munoziva manditora moyo kubva pamapindamumota muno, plus dai maiziva kuti makanaka sei handifungi kuti maifamba mega musina murume wenyu.” Munongoziva vasikana kuti isu madzimai takarumbidzwa tinonzwa manyukunyuku. Ndakamboda kuramba zviye zvekunyeperaka. Hazvaiita kuti ndingobvuma kunyange hazvo beche rangu ratondiudza kare kuti ranonokerwa. Akasvika paiva nekamugwagwa kaisa shandiswa zvakanyanya ndokutena mota afamba zvishoma opinda mukasango kaiva pedyo. Ndakamubvunza kuti aiva oenda kupi, akati aida kuzvibatsira asi ndaiva ndatoona kare paivanepfungwa dzake. Akabuda kwekanguva kadiki ndokudzoka zvake. Apa ndipo pandakaona kuti aivawo murume akasvika uye ndakatoona kuti mboro yake yaiva yadhindikira pabhurukwa rake. Beche rangu rakatanga kuvhita-vhita neshungu iwo mazamu achivavira vavira. Spencer akasviko gara pedyo neni ndokundibata pabendekete rangu. Aifunga kuti ndichamubvisa ruoko rwake. Dai aiziva kuti neniwo ndaiva ndakuvara handifungi kuti aiswero pedza nguva. Ndakaona shasha yondibata zviboda zvanguzvinyoro nyoro zvino nzwisa nyere. Rumwe ruoko akabva atopinza murokwe mangu. Ndakavhura makumbo kuti akwanise kusvika kubeche rangu rakanga ratota kare. Kana ari matinji vasikanawe mwari akaita zvokundiramwira. Ndakatanga kukamwa matinji zvaifadza samare. Iye aitoita kunge ari kukama mombe dziye dzemukaka. Spencer akambondirega ndakadorootanga kutyora tyora maseats ake emota. Ndakashama kuona mumota moita kunge maiswa kamubhedha hamena kuti mota dzose dzinodaro here. Ndakabviswa zvose zvandaiva ndakapfeka kusara ndisina kana chii zvacho, naiyewo akazvikumura hembe dzose. Vasikanawe, musi uyu ndipo pandakaona kuti pane varume vatakura zvirombo. Ko isu handiti takanga takajaira dzaana baba vaT chete. Zimboro zvino rakanga rabuda tsinga kuti tara tara kunge midzi yeparuware. Akavhura makumbo angu, apa zvino ndaiva ndarara nemusana.
Ndaifunga kuti zvino yaiva youya yandairwarira, izvo bondo. Handaimboziva kuti kunanzviwa beche kunonaka zvakadai. Aiti akadzonza matinnji angu achiita semhuru chiri kuyamwa opinza rurimi rwake mukati mumheche chaimo. Ndakanzwa kupisirira kwerurimi rwake ruchinyatsonanzwa makongo ose, hamawe ndakanakirwa pachokwadi. Ndakozotunda zvanyanya kuzipa, ndaive ndoti “Mai kani zvangu,Spencer wandiuraya kani maiweeeeeeeeeeeeeee” ndakamutswa ndofongoreswa iya yavanoti dog style, ko isu taizvizivira kupiko. Yakabva yauya amai mwana senyoka iya inonzi mhungu iri kupinda ubako. Yakasvikonzi kumhata chaiko bvoo ndinoreva kuya kunoburitsa ndove chaiko. Rume rakatanga kukoira uku richifemereka kunge munhu achangopedza kumhanya makundano enhano zana. Ndakazunzachiuno changu kuti anyatsonakirwa, kunyange ndaisaziva hangu zvimwe asi pachikapa vashoma vakadzi vaiti pwee. Nokuti izvi ndakazvidzidziswa kuchitendero chedu. Ndakachichanjwa style, this time ndakarara ndakatarisa mudenga. Spencer akaiti zvinomubeche chaimo mvooo, machende ake akabva asvikovha mudhidhi wangu kuti ndi. Ndipo pandandinodanwa ndikadavira apa nokuti iyi ndiyostaira yandaiva ndakajaira. Ndakamurovera chikapa chengwena chaicho uku ndakamukochekera nemakumbo angu. Maoko ake aiva akandimbundira nechekumusana uku. Rume rakabuda marute aye anonzi masiriri nekunakirwa. Akazoti ava kuda kutunda rume rawedzera speed yekukoira zvaita kuti neniwo ndiuyewo. Ndakamusefa neimwe style yatinoti yechisero, varume vashoma vanoiziva. Ukaiitirwa nemumwe chokwadi unotiza mukadzi wako. Apa ndaiva ndanakirwa that’s why ndakapawo murume uyu aiva andibvisa munzara yakareba kudai. I told him that I was coming now. And he said (achigomera) “And meeeeeeee toooooooo ahhhhhhhh ohhhhhhhhh. Rume rakanditundira zvandaisati ndaitwa na baba T. Ndakanzwa huronyo hwake huchirova kwakaperera chibereko changu chaiko. Ndinofunga hapana asina kuridza kamhere kekunakirwa panguva iyi. Zviya zvokuti heee use protecter plus zvatinoona pamaTV, unenge usina nzara yekusvirwa vasikana.
Next story FINAL PHASE PACHIREMBA NA XTREME
Previous story Dhuma Dhuma nemukaradhi kumakombe tichitora Mapassport by Museyamwa